Global Voices teny Malagasy » Ora sisa no isaina ao Arzantina mba handaniana ny lalàna fankatoavana ny fanalan-jaza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Jona 2018 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Romina Navarro Nandika (en) i Laura Vidal, Kristina Edinger, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Arzantina, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Hetsika mosoara maitso indray mihelatra ao amin'ny Kongresy. Sary tao amin'ny pejy Facebook- n'ny Fanentanana Nasionaly ho an'ny Zo “Hanala zaza Azo Antoka, Ara-dalàna sy Malalaka”, niparitaka tao amin'ny aterineto.
Nanapa-kevitra tamin'ny 13 Jiona ireo mpikambana ao amin'ny antenimieran'ny Kongresy ao Arzantina, Antenimieran'ny Solombavambahoaka raha toa ka hanome fankatoavana mialoha amin'ny volavolan-dalàna izay hametraka ny fanalan-jaza ho ara-dalàna. Efa nanomboka tamin'ny fomba ofisialy  tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity ny adihevitra, dingana manan-tantara teo amin'ny tolona naharitra ela  momba ny zo ara-pananahana ao amin'ny firenena izany.
Nandritra ny roa volana, nihaino ireo hevitra samihafa manohitra sy manohana ny Antenimieram-pirenena. Nahatonga ireo fanovana sasany tamin'ny volavolan-dalàna  ny fotoanan'ny adihevitra mba hahazoana vato avy amin'ireo solombavambahoaka tsy tapa-kevitra. Ny tena manan-danja indrindra dia ny fahafahan'ny dokotera milaza fanoherana noho ny feon'ny fieritreretana, na dia tsy maintsy manana matihanina eo amin'ny mpiasa izay manaiky handroso amin'ny dingana (fanalan-jaza) aza ny hopitaly. Ankoatra izany, ilaina ho an'ny vehivavy latsaky ny 16 taona ny faneken'ny ray aman-dreny na ny mpiahy ara-dalàna.
Mandritra izany, nisy ny adihevitra hafa nipoitra anatiny sy ivelan'ny aterineto: Nanomboka ny volana Aprily isaky ny Talata, nihaona teo anoloan'ny Kongresy niaraka tamin'ny mosoara maitso ho toy ny mariky ny tolona ireo fikambanana maro momba ny zon'olombelona sy ireo vondrona fiarahamonim-pirenena, nasain'ny Fanentanana nasionaly ho an'ny zo hanala zaza azo antoka, ara-dalàna sy malalaka . Mivaky toy izao ny teny filamatr'izy ireo: “Fanabeazana ara-pananahana mba hanana safidy, fanabeazana aizana mba hisorohana fanalan-jaza, fanalan-jaza ara-dalàna mba hisorohana ny fahafatesana”. Nisy ihany koa ireo fihetsiketsehana manohitra  ny volavolan-dalàna notarihan'ireo fikambanana ara-pivavahana samihafa sy ireo vondrona manohitra ny fanalan-jaza miaraka amin'ny teny filamatra hoe “Andeha havotana ny aina roa”.
Ny 13 jona, hisy fiaretan-tory hotontosaina  eo anoloan'ny Kongresy mandritra ny fanapahan-kevitry ny Antenimieram-pirenena. Fitsapan-kevitra maro  teo amin'ny mponina no naneho fanohanana ankapobeny ny volavolan-dalàna. Na dia ilay mpanao gazety fanta-daza Eduardo Feinmann, mpanohitra mafana fo ny fanalan-jaza aza mba nanao fitsapan-kevitra haingana tao amin'ny Twitter ary tsy dia faly loatra tamin'ny vokatra azo :
“Fitsapan-kevitra. Manohana sa manohitra ny fanalan-jaza ara-dalàna, azo antoka, maimaim-poana ianao?” [78% manohana, 16% manohitra, 6% tsy manan-tsafidy].
Na dia izany aza, hatramin'izao, mampiseho ny fanadihadiana mikasika ny latsa-bato mety ho ataon'ny depiote fa mirona kely any amin'ny fanoherana ilay lalàna ry zareo. Mbola marobe ireo vato tsy voafaritra na izany aza, na ireo depiote tsy tapa-kevitra na tsy te-hilaza fotsiny ny safidiny mba hisorohana ny faneriterena na fandrahonana. 
Ny andro faran'ny adihevitra ofisialy no nampisongadina ny fanolorana matanjaka avy amin'ny Minisitry ny Fahasalamana,  Adolfo Rubinstein izay manohana ny tsy fanamelohana ny fanalan-jaza:
Nanana demokrasia 35 taona isika. Olana hatrany ny resaka fanalan-jaza. Mivaingana ny porofo: mampihena ny fahafatesan'ny reny eo am-piterahana sy ny isan'ny fanalan-jaza ny tsy fanamelohana. Mila manao zavatra isika na amin'ny fomba ahoana na ahoana.
Raha omena ny fankatoavana mialoha, dia hifindra any amin'ny Antenimieran-doholona ny volavolan-dalàna, izay mbola maro ireo vato manohitra ny fankatoavana hatramin'izao – amin'izao fotoana izao, betsabetsaka mihitsy . Kanefa mety hiova izany, arakaraky ny vokatry ny adihevitra mitranga ao amin'ny Antenimieran'ny Solombavambahoaka, izay manana anjara lehibe ireo mbola tsy tapa-kevitra.
“Mosoara maitso iray hafa fotsiny mijery ao amin'ny Kongresy aho”
Sarotra ny tsy miraharaha ny fiantraikan'ny hevitry ny besinimaro, tsy ao anatin'ireo fitsapan-kevitra  ihany, fa koa amin'ny alalan'ny tantara manokana samihafa nozaraina an-tserasera.
Ao anatin'ny fijoroana vavolombelona iray  tahaka izany, vehivavy iray no miresaka amin'ny antsipiriany momba ireo sakana ara-pitsarana sy ara-birao izay tsy maintsy natrehany fony izy nila fanalan-jaza ara-pahasalamana. Tsy nanonona ampahibemaso ny anaran'ireo dokotera izy, fa manoritsoritra ny antony tsy nanampian'ireo dokotera sasany azy, ary koa ny iray tamin'izy ireo izay nangataka vola be tsy toko tsy forohana ho takalon'izany:
Tsy mbola vonona tsara ny lohako sy ny vatako. Mbola nanana fanahiana aho tamin'io fotoana io, izay raha tokony hahazo fanampiana sy fomba fijery tsy mitanila nilaiko avy amin'ny tobim-pitsaboana sy ny dokotera, tafalatsaka tany amin'ny foana tsy nisy harato aho. Isaky ny natory aho, dia nanofy ratsy tamin'ny Dr. N sy Dr B […] Tsy afaka ato an-tsaiko ny momba an'ny Dr. B. Indrindra taorian'ny nahitako azy tao amin'ny kaongresy, miady ho an'ny aina.
Mahatsapa aho fa efa nanao sorona dia be dia be isika tato anatin'izay andro vitsy izay. Nisy ireo namana vehivavy sasany manome hery ahy. [Tahaka ny hoe] nitazona ny tanako izy ireo, tahaka ny [nataon'izy ireo] tamin'io andro io […] mosoara maintso hafa fotsiny mijery ny kongresy aho ary mangataka azy hifidy ny fankatoavana ny fanalan-jaza.
Tao amin'ny Twitter, naneho hevitra mafonja sy fomba fijery samihafa manohana ny volavolan-dalàna ny hafa:
Nofaritan'ny Firenena Mikambana ho toy ny fomba fampijaliana ny fanamelohana ny fanalàn-jaza. Raha tsy lany ny lalàna, ireo depiote izay nanohitra ny fanalan-jaza no tompon'andraikitra amin'izany fampijaliana sy izay mety ho fahafatesana amin'izany. Tsy maintsy hitondra ny vehivavy tsirairay izay maty noho ny rà very amin'ny feon'ny fieritreretany izy ireo. Misy ny fanalan-jaza, ara-dalàna na tsy ara-dalàna.
[Raha milaza ianao hoe] “Manohana fotsiny ny fanalan-jaza ara-dalàna raha sendra misy fanolanana aho, raha tsy izany, avelao izy ireo hosokirina noho ny nanokafany ny feny”, dia tsy miraharaha mihitsy ny [fanavotana] “ny aina roa tonta” ianao [hoy ireo ao fanentanana manohitra ny fanalan-jaza]; ny tianao lazaina dia ny hanasaziana ny vehivavy, sa tsy izany? Fanalan-jaza ara-dalàna na tsy ara-dalàna, izany no resaka.
Raha lany ny lalàna, Arzantina no ho firenena faharoa ao Amerika Latina nanaraka ny fironana manerantany  amin'ny fankatoavana na tsy fanamelohana ny fanalan-jaza. I Orogoay no firenena voalohany ao amin'ny faritra nankatoa izany tamin'ny taona 2012. Vokatr'izany, nihena ny taham-pahafatesan'ny reny eo am-piterahana ary nanjary faharoa ambany indrindra ao Amerika Latina. 
Andeha ho tahaka ny firenena iriantsika ho hisy. Tsy misy kolikoly, miaraka amin'izao tontolo izao, miaraka amin'ny toekarena lehibe tompon'andraikitra, fiahiana ara-tsosialy, fifanakalozan-kevitra ara-politika….sy fanalan-jaza ara-dalàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/15/121286/
 Efa nanomboka tamin'ny fomba ofisialy: http://www.euronews.com/2018/04/11/argentina-begins-historic-debate-on-legalising-abortion
 teo amin'ny tolona naharitra ela: https://www.ladransanchoweb.com.ar/una-cronologia-y-10-razones-para-aprobar-el-aborto-legal-en-argentina/
 fanovana sasany tamin'ny volavolan-dalàna: https://www.telam.com.ar/notas/201806/287811-cambios-proyecto-legalizacion-aborto.html
 Fanentanana nasionaly ho an'ny zo hanala zaza azo antoka, ara-dalàna sy malalaka: http://www.abortolegal.com.ar/
 ireo fihetsiketsehana manohitra: https://www.lanacion.com.ar/2136198-marcha-contra-la-despenalizacion-del-aborto-hasta-el-congreso
 hisy fiaretan-tory hotontosaina: https://www.facebook.com/events/1698536460200401/
 Fitsapan-kevitra maro: https://www.clarin.com/politica/nuevas-encuestas-aborto-horas-arranque-debate_0_rkAj4JusG.html
 tsy dia faly loatra tamin'ny vokatra azo: http://www.politicargentina.com/notas/201801/24326-feinmann-hizo-una-encuesta-sobre-el-aborto-legal-los-resultados-no-lo-acompanaron-y-no-oculto-su-enojo.html
 faneriterena na fandrahonana.: http://www.perfil.com/noticias/politica/denuncian-maniobras-presiones-y-hasta-amenazas-de-obispos-y-grupos-pro-vida.phtml
 fanolorana matanjaka avy amin'ny Minisitry ny Fahasalamana,: https://www.clarin.com/sociedad/aborto-existe-podemos-soslayar-dijo-ministro-salud_0_By3-6sa1m.html
 betsabetsaka mihitsy: https://medium.com/@tuqmano/un-mapa-del-abortolegalya-2205f3cf30b5
 fironana manerantany: https://www.lanacion.com.ar/2111735-mapa-interactivo-como-se-legisla-el-aborto-en-el-mundo
 faharoa ambany indrindra ao Amerika Latina.: https://www.lanacion.com.ar/2127008-entrevista-leonel-briozzo-aborto-uruguay